Angry Bids Space yemahara kwenguva yakatarwa | IPhone nhau
Angry Bids Space yemahara kwenguva yakati rebei
Saga yeAngry Shiri nekufamba kwenguva yave imwe yeanonyanya kufarirwa muApp Store, asi nekufamba kwenguva, Rovio inoita kunge yakatadza kuenderana nezvinodiwa nevatambi uye zvishoma nezvishoma, studio yakamanikidzwa kudzikisa vashandi vayo, sezvo mazita ayo achangoburwa asina kuramba achigamuchirwa nevashandisi, avo vaneta netaiti imwecheteyo nemamwe mamiriro uye mavara. Nhasi tinokuzivisai nezvemutambo weRovio watinogona kurodha mahara kwenguva yakati rebei: Angry Birds Space, mune yayo vhezheni ye iPhone iyo ine mutengo wenguva dzose we0,99 euros uye Angry Birds Space HD, mune yayo vhezheni ye iPad iyo ine mutengo we2,99 euros muApp Store.
Iyo spatial vhezheni ye Angry Birds Space inotipa anopfuura mazana matatu emazinga akapararira pamusoro pemapuraneti gumi akasiyana. MuAngry Birds Space isu tichakwanisa kutamba muCold Cuts orbits, pamapuraneti akagadzirwa neetsvina tsvina kana nekuputika kwemakomo, pamusoro pekunakidzwa nechikamu chitsva cheBrass Gorrinos. Mumutambo uyu, kukomba kwepasi rega rega kune basa rakakosha, iro ratichafanirwa kuyedza kuti tigone kugadzirisa zvikamu zvakasiyana zvatinotarisana nazvo.
Mune ino vhezheni vhezheni yeAngry Shiri, isu tichawana vatsva mavara, masimba matsva, akakosha anotangisa zvinoenderana nenyika, mafambiro ane zero giravhiti, akavanzika ekuwedzera mazinga, pamwe neanoyevedza mamiriro ane hukuru hwakadzama, kumashure ayo achave nani kunakidzwa mune iPad vhezheni, HD. Kunyangwe uri mutambo unowanzo kubhadharwa muApp Store, Angry Birds Space inotipa mu-app kutenga, kutenga kunotibvumira kuwedzera shiri nyowani, kusvetuka mazinga ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Angry Bids Space yemahara kwenguva yakati rebei
Apple neAmazon vanopedza yakasarudzika chibvumirano pamabhuku eodhiyo